UMartin Vrijland Ikhasi le-Facebook lisuswe ngokucwangcisa kunye nobuqili: uMartin Vrijland
UMartin Vrijland Ikhasi le-Facebook lisuswe ngokucwangcisa kunye nobuqili
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	22 Matshi 2018	• 2 Comments
Ikhasi le-Facebook likaMartin Vrijland lisanda kuthathwa ngokungaxhunyiwe kwi-intanethi. Isibhengezo ngokusobala sasibangela ukuxokozela okufunekayo kwaye kwacatshangelwa ukuba kwakuyihlazo. Kwakhona walumkisa ukuba esi senzo kum ngamanye amaxesha abafundi ngaphantsi kakhulu angaya ukunikezela yaye mna bazi kakuhle, kodwa ekuhambeni kwexesha kufuneka ukugqiba ukuba kude kakhulu ngamandla iinkampani zobugcisa ezinkulu ukuba i-spypionage kunye neempembelelo zezixhobo kufuneka zimiswe. Ukunyanzeliswa kwi-Facebook kwakunamandla kangangokuba abaninzi abantu abazange babone amanqaku am. Ngamakhulu ambalwa kuphela abalandeli abangama-18,5 lamawaka baboniswe ngamaphepha am. Ukongeza, ndifuna ukuthumela uphawu olucacileyo; ingakumbi ngoku ngoku kube yinto ebaluleke kakhulu kwaye yingozi kangakanani iindlela ezichaphazelayo. Sithetha ngoku ngoku ekujoliswe kuyo wahlangana ukuchazela ngokuchanekileyo indlela abantu abava ngayo nokubona ihlabathi.
Kukho abantu abaphikisanayo ukuba xa ufihla kwi-data enkulu kunye neengcinga zobuchule, ngakumbi kuya kwenza konke okusemandleni ukukufumana. Noko ke, iingcebiso zam zicacile: bayeke ukutya iinkcukacha ezinkulu kunye ne-AI kwaye unqakraze. Enyanisweni, uya kufuneka uhoxise onke amalungelo owake wawahlola xa ufaka ii-apps ezivela kuzo zonke ezi nkampani ezinkulu zezobuchwepheshe kwaye wamukela imigaqo yokusetyenziswa. Sibapha izixhobo zokusihlola kunye nokwakha indawo apho zonke iziganeko ziqikelelwe kwaye zonke ienzo zijongwa. Sivula ucango inkqubo yolawulo ukuba sele ujongile yonke imisebenzi yethu online (kunye nemisebenzi intanethi iliso iikhamera kunye imibhobho njengoko kusenokwenzeka ukuba bazazi), kodwa kwixesha elizayo yethu yengqondo ufuna ukubukela.
Namhlanje ndabona lo mfanekiso nqaku malunga neenkampani ezinkulu ze-tech, i-Google, i-Apple ne-Amazon. Eli nqaku lathi iinkampani ezinkulu zezobuchwepheshe zineyona nxaxheba ebaluleke kakhulu ebomini bethu kuba zikwazi ukujongana neemfuno ezibalulekileyo ezibalulekileyo zabantu. Ingqondo ifuna uhlobo lobuthixo obutsha esinokubeka phantsi imibuzo yethu kunye nokungaqiniseki. I-Google izalisekisa ngoko indima yodhixo, ngokubhekiselele kwinqaku. I-Facebook iphendula kwisidingo sokuba kwindawo ethile okanye ukufumana uthando kunye nokuxabisa kunye ne-Amazon (ephantsi kwezona zonke eNetherlands) inikezela ukusetyenziswa. I-Apple iya kubonelela ngeempawu zokuqala, apho ibeke uphawu lwesimo. Amadoda ane-Macbook Pro ke ngokohlobo lwama-alfabhethi.
Ngokomntu, ndiyifumana le ndlela ehambelana neyona nyaniso. Ngokombono wam, ezi nkampani ziye zaqulunqwa ngolu hlobo, apho izidingo eziphambili zabantu zidibene nazo, kodwa ngenjongo ukubamba bonke abantu kunye nokulungiselela umntu ongenanto. Akukho into eyenzekayo ukuba abantu abanjengo-Elon Musk noRay Kurzweil bavakalisa ukuba sesele i-cyborgs engaphantsi okanye ngaphantsi, kuba iindawo ezinkulu zobomi bethu zidlala kwi-intanethi. Yaye yeso sizathu sokuba ngalezi zixhobo ezintle ezifana nee-smartphone zafuneka zikhange kwiwebhu. Simele ukutshintsha ibe cyborgs kunye ethengiswayo apha nguye ukuba siya kungenjalo kukuphelisa AI kananjalo namathuba enkulu kunye nemilinganiso emitsha luya kuvula thina (funda apha iinkcukacha). Ndacacisa ngamanqaku ambalwa ukuba iya kuhamba phambili, oko kukuthi injongo ekugqibeleni kukuba siyishintsha izidalwa zenyama ezingathathi hlangothi zesini.
Ngoku ukuba zonke izitho zisemthethweni zivela eburhulumenteni kwaye unokukhetha kuphela ukuzinikela okanye cha, uhulumeni unokwenza okungenani ulungelelaniso oluthile. Oku kuchaza, umzekelo, ukuba i-nanotechnology inokufakwa emzimbeni wakho ukwenzela ukuba izitho ezifanele 'ukugcinwa kwendawo edeleyo'. Umthetho wokudosa wenza ukuba ukwazi ukubheka ingqondo yakho ngokukhawuleza xa usebenzisa intanethi. Inyaniso yokuba kufuneka ufike kwi-intanethi isinyathelo esilandelayo esilandelayo kwinkqubo eqhubekayo kwi-cyborgism. Sivele siyi-cyborgs, kuba sijonge kwiikrini zethu kwisiqingatha semini kwaye ininzi yolwazi esilufumanayo livela kwiwebhu. (II-web isebenza ukubamba iimpukane kwaye ngokuqhelekileyo inesicabangca esakha i-web kwaye idla iimpukane ezibanjwe.) Inxibelelwano yonxibelelwano phakathi kwewebhu kunye nobuchopho bethu ngelishwa ngelona lucotha nje. Oko kusekufuneka kwenziwe ngezandla ze-2, kodwa indlela elula ngayo ukuba unokwenza uxhumano lobuchopho ngqo. U-Elon Musk uza kuyisombulula le ngxaki kuwe. Kwaye abaninzi abantu namhlanje banokuthi cha, kodwa isizukulwana esilandelayo asiyi kufuna nto kwaye asiyi kubona ingozi.
Ngoko ngoku sibonile ukuba sihlolwe ngexesha elikhulu (kwaye oku kwakhona ku boniswa); ngoku ngoku siyazi ukuba ngoku asikho nje inombolo ye-BSN, kodwa ukuba imizimba yethu nayo ivela kwilizwe en ngoku ukuba sinokulindela ukuba umthetho we-drag uzonqatshulwa, lixesha lokuthi: lanele!
Eneneni ubuya naziphi na iinkampani obuchwepheshe ezinkulu ukubhala ukukhankanya ukuba ukhe (in lokongamela) njengoko ivunywe amalungelo ukuba bajonge yonke lwakho lwabafowunelwa, iifoto, iividiyo, ii-imeyili, njl retracts kwaye ukuthi, maningabi uvumele wena ukuvula ikhamera okanye imakrofoni nanini na xa befuna. Ingaba kungakhathaliseki ukuba yenziwe ngokusemthethweni: ingaxhomekeke kwingxelo oyenzayo kwaye kucacile ukuba 'cha' utsho kwi-domain yakho. Ukuba uyayibheka kwinqanaba lomphefumlo, akukho mntu unokulawula. Ufike apha kule polanethi kwaye unombolo ngokukhawuleza kwaye uvakaliswe uhlobo lwepropati yombuso ngaphandle kokuyikhetha. Wonke urhulumente okanye isigqeba (okanye nawaphi na iziko likarhulumente) ekugqibeleni wenza ngokusuka kwimigaqo yokuba imithetho yenziwe yi-aristocracy. E-Netherlands, abameli bomthetho kunye nabakhuseli bezomthetho bafunge ukuthembeka kukumkani. Utsho ukumkani ukuba unyuliwe nguThixo, kodwa ndisafuneka ndidibane nomgwebi onokubonisa ukuba le ngcamango. Ngoko ukuba ndakhe yamkele ilungelo ndaphule yabucala lwam, nditsala kwinqanaba umphefumlo kunye eqala nge ecacileyo 'hayi' amagunya ezihlambela ishishini labo engundoqo zodwa. Asisasebenzisi izixhobo esizithengayo kwiwebhu yinyathelo lokuqala.
Kuba bonke abasebenzisi be-Facebook abaphosole iphepha lam ngoku: bhalisela i-newsletter kwaye nifake idilesi yakho ye-imeyile kwi 'NTSHA IZINDABA'.
Uludwe lwekhonkco lovimba: rtlnieuws.nl, esquire.com
U-Elon Musk usomashishini omkhulu okanye i-DARPA yebhodi ye-transhumane ye-cyborg?
Kutheni umyalelo wokutsala uza kuba lunomdla ngokukhethekileyo ukuba i-laural lace izakuzisa ingqondo yakho kwi-intanethi
Transhumanism, yintoni na kwaye kutheni kuyingozi kangaka ngoku?
Ngaba izitofu zingasetyenziselwa ukuzitshintsha i-DNA yakho?
I-Amsterdam iqala ngokucinga ngokubhekiselele kwesini-ntetho
tags: de, Facebook, eziziimbalasane, bahlala, is, UMartin Vrijland, Ungaxhunyiwe kwi-intanethi, iphepha, yanyamalala, apho, kude
Ikhamera wabhala wathi:
23 Matshi 2018 kwi-00: 00
Ndiyabulela umnxibelelwano uMartin,
Isimemezelo esibuhlungu, kuba ngubani ofuna ukunyanzela ilizwi lakhe, akukho mntu ufuna ukunyanzeliswa kwaye kunjalo.
Kubonakala ngathi akukho nto inganikwa, kuphela uAndree van Duin anganika uluvo kwiimboniso
Kulila !!! ngoku ngoku malunga neyesibini ukuya kweshumi elinesibini
Mamela ingoma uze ugcwalise esi sibhalo
Ukuba uvula umbono wakho eNetherlands ...
Emva koko uluvo lufakwe ngokukhawuleza ....
kwaye ukuba ubonisa ukuba abeendaba bayakukhohlisa
Emva koko uyazi ukuba uChiel Beelen kunye nabo bonke bakhohlisayo
rmstock2 wabhala wathi:
24 Matshi 2018 kwi-02: 02
Emva koko, nakuba i 'Great Youtube Likhupheni', iingxaki kuba Imfihlelo Executive Service, Hilla leCawa kunye holdovers Obama singekaphendulwa, uye ngokoluvo lwam kuye umsebenzi Zuck ngisho iqonga lakhe ustrimisho FB evela ngaphakathi ku vuthela.
https://www.fulcrumnews.com/blog/2018/3/23/the-fall-of-facebook "Ngenxa yokuphulwa kwedatha enkulu yokugubungela iiforamu ze-intanethi, uMark Zuckerberg uye wakwazi ukwenza into engekho mntu ucinga ngayo: Udibanise amacandelo omabini kunye nendawo yokuzikhethela. [...] "
Olu calulo luphezu kolawulo.
« URonald Bernard udideki kunye nokuba yintoni na
URonald Bernard kunye nokucingwa 'kwexesha elitsha apho inkululeko yomntu ihlonishwa kwakhona' »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.331.632
Future op I-Coronavirus: Zivela phi iintsholongwane kwaye zanda njani kwaye zihamba njani?
Mindsupply op I-Coronavirus: Zivela phi iintsholongwane kwaye zanda njani kwaye zihamba njani?
Future op Eyona ndlela isebenzayo yokulwa i-coronavirus ivela eTshayina (ividiyo)